Hiran State - News: HS:-Xildhibaano kor u dhaafaya 270 Xildhibaan oo Cod Aqlabiyad kaga soo Horjeestey Shirka ka Furmey Magaaladda Garoowe
HS:-Xildhibaano kor u dhaafaya 270 Xildhibaan oo Cod Aqlabiyad kaga soo Horjeestey Shirka ka Furmey Magaaladda Garoowe
HS:- Shir ay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka mudayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo uu shir gudoominayey gudoomiyaha baarlamanka Madoobe Nuunoow Mohamed ayaa laga soo saaray qodobo looga soo horjeedo shirka ka furmay magaalada Garoowe.
Xildhibaanada Baarlamanka Federaalka Soomaaliya ee dhawaanta xilka ka qaaday Guddoomiyahii hore ee Barlamaanka Shariif Xasan Shiikh Aadan ayaa maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay xarunta Golaha shacabka ee Magaalada Muqdisho,Kulankii maanta oo uu shir guddoominayay Madoobe Nuunoow ayaa ajandaha looga dooday waxa uu ahaa shirka ka furmay maanta Magaalada Garoow si ay mudanayaashu u cadeeyaan mowqifkooda ku aadan arintaas.
Mudanayaasha oo si degan uga dooday arinta ayaa dood dheer iyo falanqayn kaddib waxa ay Mooshin ka keeneen Shirka Garoowe Qodobada ka soo bixi doona iyo kuwii horey uga soo baxay .Kulanka ayaa cod loo qaaday Mooshinkii shirkaa laga keenay iyadoona in ku dhow laba Boqol iyo todobaatan Mudane ay u codeeyeen in la qaadaco gebi ahaanba Qodobada shirkaas ka soo baxa iyo kuwii horaba iyadoo ay arintaasi u taalo shaqsiyaadkii horey uga qeyb galay shirkii kan ka horeeyey.
Cod qaadista oo ahayd gacan taag ayaa waxaa ka soo hor jeestay ilaa iyo Tobaneeyo Xildhibaan halka sedaxna ka aamustay.Gaba gabadii shirka ayaa waxaa halkaa ka hadlay Guddoomiyaha baarlamaanka Madoobe Nuunoow Mohamed kaasoo sheegey in si aqlabiyad leh ay u meel mariyeen Go’aan ay ka qaateen Shirka Garoowe ee maanta ka furmay Magaalada Garoowe.
Xildhibaanadan Barlamanka ayaa sheegey in shirkaas iyo natiijada ka soo baxdaba ay ahaan doonaan kuwo aan Soomaaliya ka shaqayneyn isla markaana ay ku gacan seeyrayaan go’aan walba oo ka soo baxa shirkaas.
Sikastaba baarlamaanka Soomaaliya marka laga reebo xildhibaano ku maqan dibada iyo kuwo geeriyooday intooda badan waxey maalinkasta ku shiraan xarunta golaha shacabka iyagoo kulamooda caadiga ah joogta u wata tan iyo marki ay gudoomiayaha baarlamaanka Soomaaliya u doorteen Madoobe Nuunoow Mohamed.
La soco wararkeena danbe iyo go,aanada ka soo baxa mudayaasha
· admin on February 15 2012 19:14:13 · 0 Comments · 1655 Reads ·
14,581,468 unique visits